All posts tagged "Kalaw"
The Best City To Travel By Train
The efforts of travelling by train are reducing the transportation cost and havingachance to witness the...
Jovago | May 3, 2017
About Pindaya If you say Pindaya, everyone will see the limestone caves and thousands of pagodas. Pindaya is...
Jovago | April 28, 2017
ကလောမြို့အကြောင်း ထင်းရူမြို့တော်လို့လည်းသိကြတဲ့ ကလောမြို့ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ အေးချမ်းသာယာတဲ့မြို့လေးဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်မှာ ကိုလိုနီတွေ စိုးမိုးစဉ်ကတည်းက နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတုအေးမြတယ်။ မြို့ကို မိုင်းညို့ညို့ တောင်တန်းတွေက ၀န်းရံထားပြီး သာယာတဲ့ရူခင်းတွေကြောင့်...
About Kalaw Kalaw also was known as Pine Land is located in Shan state. It wasapopular...
Jovago | January 12, 2017
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လည်ပတ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ ခရီးသွားတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ထင်းရှုးမြို့တော်လေးအကြောင်းတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ထင်းရှုးမြို့တော်လို့တင်စားကြတဲ့ကလောကို တောတောင်အငွေ့ သက်တွေကိုခံစားရင်း ဒေသခံတွေရဲ့လှုမှုဘဝတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ ခြေလျင်ခရီး ရှည်တွေသွားရောက်ကြတာ တဖြည်းဖြည်းများလို့လာနေပါပြီ။ ယခင်ကတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဆိုရင် တောင်ကြီးအင်းလေးဘက်ကို အသွားများကြပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကစလို့ ရေပန်းစားလာတာကတော့ကလောခြေလျင်ခရီးစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားသွားရောက်မှုမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှခရီးစဉ်တွေစီစဉ်ပေးတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း တွေလည်းအများပြားပါပဲ။...